Baning Pot & Pan (Interview)… – PVTV Myanmar
· 8 months ago ·17 Comments
Baning Pot & Pan (Interview)
ဘာ့ကြောင့် PDF ထဲဝင်ခဲ့သလဲ၊ မိဘတွေကရော ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို သဘောတူရဲ့လား၊ သင်တန်းမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲ စိန်ခေါ်မှုတွေရှိလဲ၊ သင်တန်းမှာ ဘာတွေသင်ယူလေ့လာရလဲ၊ တော်လှန်ရေးပြီးရင်ရော ဘာတွေ ဆက်လုပ်မှာလဲ စတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် Phoe Chan တစ်ယောက် ဘယ်လိုဖြေထားတယ်ဆိုတာကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 5.5K Share – 294
အစိုးရ(၆) လပြည့် ပြည်သူသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း
Loilem Thar says:
2021-06-06 at 6:38 PM
2021-06-06 at 6:40 PM
2021-06-06 at 6:43 PM
Wint Thinzar says:
2021-06-06 at 7:01 PM
၂.၂ ကတည်းကတီးတယ် ဒီနေ့ထိတိုင်တီးဆဲပါ
2021-06-06 at 7:05 PM
Eaint Thadar Nwe says:
2021-06-06 at 7:06 PM
PVTV ရှင့် cb လေးတချက်လောက်ကြည့်ပေးပါရှင်
Zay Yar Min Htet says:
2021-06-06 at 8:08 PM
နေ့စဉ် ည ၈ နာရီအတိမှာ မပြတ်တမ်း ခုချိန်ထိ တီးနေဆဲပါ
Pyae Pyae says:
2021-06-06 at 8:54 PM
နေ့စဥ်နာကျင်မူ မုန်းတီးမူနဲ့ သံပုံး ဆက်တီးနေပါတယ်
Mg Aung Khaing says:
2021-06-06 at 9:46 PM
It’s banging pots and pans. Not baning!
Naing Zaw says:
2021-06-07 at 3:13 AM
ယြ န္း says:
2021-06-08 at 7:57 AM
Thet Lwin Aung says:
2021-06-08 at 5:35 PM
Ma Mu says:
2021-06-09 at 6:39 PM
သူငယ်ချင်းဖတ်ဖို့ တော်လှန်ရေးပေးစာ – ၂…